Dadka casriga ahi waxay filayaan inay ku noqdaan noloshoodii asalka ahayd kacdoon & walwal maalinle ah waxayna daba galaan nolosha runta ah. Iyada oo lebbis quruxsan oo raaxo leh, jaakad isboorti oo fudud & mid caadi ah, waxaan ka gaabin karnaa tallaabooyinkeenna nolosheena soonka iyo kacsan ee leh aamusnaanta aamusnaanta.
Jaakad isboorti waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada muuqaalka nolosha, ha noqoto socod, socod socod iyo ciyaaro kale oo banaanka ah ama tababar gudaha ah. Iyada oo leh astaamo isboorti oo shaqeynaya, waxaa si dabacsan loogu isticmaali karaa isboorti kala duwan oo si fudud looga beddeli karaa aagga isboortiga illaa xilliga firaaqada. Qalabkan suufka ah oo buuxa ayaa adeegsanaya miisaanka dhexdhexaadka ah ee dharka leh dun gaar ah si loogu xiro dusha dharka dabiiciga ah ee dabiiciga ah, ka dibna lagu daro dharka shaqeynaya, taas oo ka dhigaysa jaakada isboortiga si loo gaaro haynta diirimaadka ugu badan iyo ballaadhinta.
Kooxdayada R & D waxay adeegsadaan dharka shaqada ku xiran si ay u gaaraan diirimaad, ballaadhin, raaxo & saameyn mood. Iyada oo leh xarig jiido ah oo daboolan, caag ah hoosta iyo kabanka & moodalkii ugu dambeeyay ee biyuhu xireen & feeriskiisa, nashqaddani waxay noqon doontaa mid aan biyuhu karin oo qabow-caddeyn u ah. Qaabka ugu dambeeya ee alaabada dharka ayaa ah naqshada joomatari joomatari, taas oo aan kaliya hagaajin karin qaabka & xiisaha laakiin sidoo kale qancinaya daba galka dhalinyarada ee kala duwanaanta iyo shaqsiyad ahaanta, sidoo kale waa tarjumaad qumman ee qurxinta caadiga ah.
Si kastaba ha noqotee, cayrsiga dadku ee dharka waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan iswaafajinta moodada iyo waxqabadka, sida koodhka roobka ee Gabdhaha. Kala duwanaanta maaddada ayaa ka dhigaysa roobaadka mid hodan ah oo midab leh, farqiga u dhexeeya ma aha oo kaliya inuu la kulmo baahiyaha xilliyeed ee kala duwan, laakiin sidoo kale wuxuu ka dhigayaa dharka roobku inuu leeyahay qaabab iyo qaabab gebi ahaanba ka duwan. Moodada, shakhsiyadda iyo muuqaalka sheyga oo aan hal qaab oo dheeri ah lahayn waxay la jaanqaadayaan xulashada dadka hadda kun-sano jirka ah ee ku aaddan daba-galka shaqsiyadda iyo xirashada dhabta ah.
Koodhadhka roobka ee Gabadhani wuxuu jebiyaa qaabka iyo maaddada dharka roobka dhaqameed, taas oo keliya aan loo isticmaali karin hoy ahaan maalmaha daruuraha iyo maalmaha roobka, laakiin sidoo kale loo isticmaali karo sidii jaakad si caadi ah loogu xidho, isku-darka midabkiisa dhalaalaya ayaa dadka u keenaya dareen firfircoon.
Jirka koodhku wuxuu isticmaalaa maro macmal ah oo dedan halkii uu ka isticmaali lahaa dharka caadiga ah ee loo yaqaan 'PVC', oo leh dabacsanaan ballaaran una oggolaanaysa carruurta inay jidhkooda ku fidiyaan raadiyeyaal waaweyn si ay u sii daayaan dareenkooda dabiiciga ah. Waxay kordhisaa xiisaha badan si loo dhejiyo qaababka kala duwan ee silsiladaha dusha ka ah dharka hufan ee PVC ee garka iyo darafkeeda isla markaana dadka iyaga xirtaa ka dhigaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka, jiinyeerku sidoo kale wuxuu ka sameysan yahay maadada PVC, taas oo ka wanaagsan inay la jaan qaado dharka.